TTSweet: ဂျကားမပီတူများနှင့် နေထိုင်ခြင်း ...
myo September 23, 2010 at 3:39 PM
တခါအဆောင်မှာ သူငယ်ချင်းတယောက်က သီချင်းထဆိုတာ (အရှစ်ရှောင်းလေး ရှားမှာစိုးတယ်)၂ ဆိုတော့ ဘာတွေဆိုနေပါလိမ့်လို့ ထင်နေတာ အချစ်ချောင်းလေးခြားမှာစိုးတယ် ကိုဆိုနေတာကိုးးးး :D
ပူးတေ September 23, 2010 at 4:01 PM
သူငယ်ချင်းတယောက်က ဇေယျဝတီက သူလဲ ဦးမောင်ခြိမ့်တို့နဲ့ တူတူပဲ.....ဂျတားမပီဘူး.... အိမ်က မစ္စတာပီက ဖြူးက သူလဲ တူတူပဲ.... တီတီဆွိပြောတာ ရီချင်လိုက်တာ... ရုံးမှာမို့ အားရပါးရ မရီရဘူး... ဆရာမ စာသင်တဲ့ နေ၇ာကို အရီချင်ဆုံးပဲ....
Sonata Cantata September 23, 2010 at 5:03 PM
တီဆွိရေ...အိမ်က သားငယ်က ရ နဲ့ လ မကွဲတာ...
လွယ်လွယ်လေး ဆို ရွယ်ရွယ်လေး လို့ ပြောတယ်။
သား ကျောင်းမှာ Spelling မှန်ခဲ့လား မေးရင်...။ မှန်တယ်..ရွယ်ရွယ်လေးတွေ လို့ ပြောတယ်။
ရွယ်မဟုတ်ဘူး သား လွယ်.. လွယ် တာလို့ မအေက ပြင်ပေးရင်...။
ဟုတ်တယ်လေ သားကလည်း ရွယ် လို့ ပြောတာပဲဟာ တဲ့။
ကိုပေါ September 23, 2010 at 5:29 PM
အန်တီဆွိရယ်..... ရှစ်၍ ရှစ်ခါ ရှစ်လာပြီးမှ ဦးရှိမ့်ဟာ ဂျကားမပီတူဆိုတာ ချာချာဖွေဖွေ တွေ့ချိသွားတာလား။း-)
ကျနော်တို့ ပွင့်ဖြူဖက်ကတော့ “ရှ” သံကို “ဆ” ထွက်တာဗျိုး။
သမီးရေ... ဆိုရင် “ဆင်” လို့ ထူးလို့ထူးချင်။ “ဆမ်” လို့ ထူးချင်ထူးတယ်။
“အဆက်ဆို တစိလေးမှ မဆိဘူး” ဆိုတာမျိုးပေါ့။
ဟုတ်တယ် .. အဲဒီဒေသဘက်ကိုသွားတော့ .. လိုက်ချီးသီးတွေပေါ်တဲ့အချိန်..မှတ်မိသေးတယ် .. .. ဈေးဆစ်ပြီး ၀ယ်ခါနီးတော့... ဦးလေး..ချိုရဲ့လားလို့ မေးလိုက်တာ ... " ရှီုတယ် ကလေးမှ .. ရှဉ်ရင် ဦးလေးဆီလာပြန်ပေး .. ပိုက်ဆံပြန်ပေးမယ်" လို့ပြောတော့ .. ခဏလောက်ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်သွားတယ်။။ :P
သက်ဝေ September 23, 2010 at 7:55 PM
ပိုစ့်ရော ကော်မန့်တွေပါဖတ်ပြီး ရုံးဆင်းခါနီး အူတက်မတတ် ရယ်မောသွားပါကြောင်း... (ညကျ တခါ ထပ်လာဖတ်မယ်... ကော်မန့်တွေကလဲ ရယ်ရမှာ သေချာတယ်..)
Anonymous September 23, 2010 at 10:45 PM
ကိုပေါ ပြောသလိုပါပဲ “ရှ” ကို “စ” သံထွက်တာ တွေ့ဘူးပါတယ်..မွန်ပြည်နယ်ဘက်က ဆွပ်ပရား နွယ်ဝင် သူငယ်ချင်းတယောက်ပါ..သူပြောတာတစ်ခုကို ခုထိ မှတ်မိနေသေးတယ်..ရှောက်ပင်က ရှောက်သီးတစ်လုံးကိုခူး ရှောက်ခွံကိုသေချာခွါ အထဲက ရှောက်စိလေးတွေကို ထုတ် ရှောက်ရည်ကို ပါးစပ်နဲ့စုပ်ရတာ အ၇မ်းအရသာရှိတာပဲတဲ့..ပြီးတော့သူကပြောသေးတယ် ငါက အ“ရှိ”ကို အ“ရှိ”အတိုင်းပြောတာတဲ့ဗျား..
Gyidaw September 23, 2010 at 11:39 PM
Come on KO Gyi Kyauk!Writeapost on the pronounciation of people from Myingyan,Pakokku region. Dear TTSweet!There r so many different pronounciations not only in myanmar.If KGK writes the post what i asked for,it gonna hit lol.
ချစ်ကြည်အေး September 24, 2010 at 12:07 AM
တို့ အသိမောင်လေးတယောက် မေးဖူးတယ်။
"အမ စလုံးမှာ ချောက်တီး ရှိလား" တဲ့
ကိုယ်ကလည်း သူ ဘာပြောလို့ ပြောနေမှန်း မသိ။ နောက်မှ အဆိုတော် ချစ်ကောင်းကို သူက ရှစ်ကောင်း ရှစ်ကောင်းနဲ့ ခေါ် ခေါ်နေတတ်တာ သွားသတိရပြီး
"ဟဲ့ နင် ပြောတာ ရှောက်သီးလား" ဆိုတော့မှ
"ဟုတ်တယ် အမ ချောက်တီးလေး တုတ်စားချင်လို့ပါဗျာ" တဲ့...
မတ်စိတို့များ ဂျူဂျူး အပျိုဖြစ်ခါနီးကျမှပဲ ဂျဂါးလည်း ပီဝူး လုပ်နေသေး ဟ ဟ ဟ.....:P
ရွှေရတုမှတ်တမ်း September 24, 2010 at 12:35 AM
ဂျီးတော်ရာ...ပခုက္ကူ၊တောင်သာ က သူတွေသာ နသတ်(န်) ငသတ်(င်) မပြီတာ
မြင်းခြံတွေက ပီပါတယ်...ဒါပေမဲ့ နယ်ချင်းက ဆက်နေတော့ အဲဒီကလူတွေ မြင်းခြံ လာနေပြီး မြင်းခြံ ကလို့ ဆိုကြတော့ မြင်းခြံကလူတွေပါ ရောယောင် နာမည်ပျက်နေတာ၊ ချ နဲ့ရှ ကတော့ သဲတော ဝမ်းတွင်း ကနေ တောင်ငူထိ ၇န်ကုန် မန်း လမ်းတလျှောက်က လူတွေ မပီကြဘူး၊ အဲဒီနယ်တွေက ဆရာမတွေကမပီတော့ ကျောင်းသားတွေပါ မပီတော့ဘူး၊ ပျော်ဘွယ်က ကျနော့တူတူမတွေကို အိမ်မှာပီအောင်ပြန်ကျင့်ပေးရသေးတယ်..
may s lwin September 24, 2010 at 3:28 AM
အဟီး... Happy Soul ကတော့ဂျကားပီတဲ့ တောင်ငူသူပါရှင့်.. တောင်ငူသူတွေလည်း ခ နဲ့ ရ မပီကြပါဘူး.. သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိတယ်.. အုတ်တွင်းသူ.. တောင်ငူနားက မြို့ သေးသေးလေးပေါ့။
သူကတော့ ရကောက် နဲ့ ခကွေးကို တလွဲစီမပီတာ..
ဆယ်တန်းတုန်းကဆို သူ့ ကိုစကားပီအောင် " ၆ လမ်းက ရှောက်သီး ချဉ်တယ် " ကို ပီအောင်ပြောဆိုပြီးလေ့ကျင့်ခိုင်းတာ.. သူပြောလိုက်တာက " ရှောက်လမ်းက ချောက်သီး ရှင်တယ် " တဲ့ ရီလိုက်ရတာ .. =)
may s lwin September 24, 2010 at 3:38 AM
ကိုပေါ>> ဟုတ်တယ်ဦး... ဟိုးအရင်တုန်းက အိမ်မှာနေတဲ့အမကြီးတွေလည်း "ရှင်" ဆိုရင် "ဆမ်" လို့အသံထွက်တယ်.. အမေကခေါ်ပြီဆို "ဆမ် လာပြီအန်တီ" လို့ ထွက်တာ.. သူကတော့ ဘားအံဘက်က..ကရင်ဝဲ ဝဲတာထင်တယ် ..
လသာည September 24, 2010 at 9:45 AM
ဟားဟား ဒီနေရာမှ မဆွိနဲ့ တူပြန်ပြီ။ သူလည်း စကားပီဘူးလေ။ အဲလိုပဲ ရှစ်တယ် ရှစ်တယ် ခဏခဏလာလာပြောတာ နားညည်းတာနဲ့ ပြန်ရှစ်လိုက်ရတား)))))
ဖုန်းဆက်ပြီး သူ့ကိုပြန်ပြောလိုက်တော့ သူက “ဟာ.. ချက်စရာကြီး။ လူတကာ လိုက်ပြောနေလား။ အုပ်စုတောင့်အောင် ဦးရှိန့်နဲ့ ပါတီထောင်ဦးမှပဲတဲ့”(^^;)
T T Sweet September 24, 2010 at 11:51 AM
ဟားဟား ... ဒီထဲမတော့ ဦးရှိမ့်တို့ အဖော်တွေ တယ်ပေါတာပဲ ...
လသာညရေ ... အဲဒီရှစ်တယ်ဆိုတာလဲ တူတာပဲ ... ပိုဆိုးတာက ကိုယ့်နာမယ်ကလဲ " ချ " ပါတာဆိုတော့ စဉ်းစားသာကြည့်ကြပါတော့ ...သူရီးစားစကားပြောတုံးက ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတာ ...
ကိုကြီးကျောက် တစ်ပုဒ်လောက်ရေးပါဦး။ ပခုက္ကူဘက်က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်တော့ရှိတယ်။ လွင်ဆို လွန် တဲ့ ... ပုဇွန်ဆို ပုဇွင်တဲ့ ...
ကိုပေါနော် ... အစက်မစိဘူး ပြောနဲ့ ... များတို့က အစက်နဲ့ လူလုပ်နေတာ ... (ကိုပေါပြောသလို ပြောကြည့်တာ ..... ဟီးဟီး ... )
အမည်မသိရဲ့ ရှောက်သီးပုံပြင်ကတော့ အစားထိုးပြီး မဖတ်ရဲဘူး ... မီးမီး စက်စက် ...း))
ရှစ်သူငယ်ရှင်း အန်တီသက်ဝေ ... ညကလာဖတ်သေးလား။
လာလည်သူ၊ လာမန့်သူ၊ လာဖတ်သူများအားလုံး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
susu September 24, 2010 at 9:15 PM
ဘာသာပြန်။ '။‌ရှောက်ပင်‌အောက် ‌ရွှေ‌ပျောက်တာ..ရှာလို့မ‌တွေဘူး...။"
သက်ဝေ September 25, 2010 at 1:03 AM
စကားမပီတာတွေ တသီကြီး ဖတ်သွားတယ်... ဟီဟိ
ကျွန်တော်တို့ ရှမ်းပြည်ဘက်က လူတွေကတော့ သနဲ့ တနဲ့ မကွဲတာ...
၀က် တား တို့တူတို့ လို့ မတိဘူးလေတို့ မြန်မြန်ပြောရင်အဲ့လို လွဲတာ... :D
ဝက်ဝံလေး September 25, 2010 at 4:05 AM
ခွီးးးး ရယ်သွားပါကြောင်း ကွန်မန့်တွေ ဖတ်ပြီးတော့ ခိခိ
Moe Cho Thinn September 25, 2010 at 10:49 AM
ပို့စ်ရော ကွန်မန့်တွေရော ဖတ်ပြီး ရီလိုက်ရတာ။
ပြောရရင် ပျဉ်းမနားက လူတွေလဲ ခ နဲ့ ရှ မကွဲဘူး သိလား။ ပျဉ်းမနားက ကဗျာဆရာတွေ သူတို့မြို့ကို အလည်ခေါ်တာ ချိုသင်းက ချိုသင်းနံမည်ကို ပီအောင် ခေါ်နိုင်ရင် လာလည်မယ် လို့ ပြောခဲ့တယ်။ သူတို့က ချိုသင်းကို ရှိုသင်း လို့ ခေါ်နေတာကိုး။ ဒါနဲ့ ခုထိ ပျဉ်းမနား မရောက်ဖူးခဲ့ရဘူး။
သူတို့ သုမောင်ရဲ့ ချစ်တယ် သီချင်းကို ဘယ်လို ဆို ကြမှာပါလိမ့် လို့ သိချင်ခဲ့ဖူးတယ်။ :))
tin min htet September 25, 2010 at 11:41 AM
ခေါင်းစဉ်ဖတ်လိုက် ကတည်းက ဆန်ရင်းကို နာနာဖွတ်တော့မယ်လို့ ထင်သား :P
အဟိ..လူကြီးတွေ စကားဝိုင်းထဲ ၀င်ပါလိုက်အုံးမယ်။
အိမ်ကတစ်ယောက်..အဒေါ်အိမ်ကို လာလည်ပြီး မီးဖိုထဲမှာ ကူလုပ်သလိုနဲ့ နှမ်းဖြူးတုန်းကပေါ့။ အန်တီရေ.. ကြေးဥပြုတ်တွေကို ခွေးထဲ ထည့်ထားလိုက်တယ်ဆိုလို့အအဒေါ်က လာမေးတယ် သူဘာပြောနေတာလဲတဲ့။ ကြက်ဥပြုတ်တွေကို ခွက်ထဲ ထည့်ထားလိုက်တယ်လို့ ပြောတာမှန်းရှင်းပြလိုက်ရတယ်။
nyimuyar September 26, 2010 at 1:20 PM
သဘောကျလွန်လွန်းလို့ခဏခဏ လာဖတ်နေပါကြောင်းးးးး
နိုင်နိုင် January 28, 2011 at 2:54 PM
(တငယ်ချင်းငါဝက်တားဟင်းဝယ်ထားတာ တိုးတွားလို့တွန်ပြစ်လိုက်ရတယ် အတားတက်တက်တုံးတုန်းတောင်)အဲလိုပြောတဲ့သူငယ်ချင်းတယောက်နဲ့အလုပ်တူတူလုပ်ဖူးတယ်ဗျ နောက်တခါကြတော့ မန္တလေးကနေ ရန်ကုန်သွားတော့
ပျဉ်းမနားဘူတာရောက်တော့ မျှစ်ရှင် မျှစ်ရှင်နဲ့အော်နေလို့ ဘာလဲဟဆိုပြီး ပြတင်းပေါက်ဖွင့်ကြည့်တော့မှ မျှစ်ချဉ်နံ့ထောင်းခနဲရမှပဲ မျှစ်ရှင်ဘာလဲဆိုတာသိရတာဗျား
ဟုတ်တယ် တီဆွိ ရေ... ပခုက္ကူကလူတွေလည်း န် သ် ပီဘူးရယ်...ခဏ ခဏ အဟားခံရလို့ ပီချင်တော့ ဘယ်လိုလုပ်လဲ ဆိုတော့ ... ဥပမာ ထွန်းထွန်းဝင်း ဆိုတဲ့လူကို ခေါ်မယ်ဆိုရင် ခေါင်းထဲမှာ ထွင်းထွင်းဝန်း လို့ စလုံးပေါင်းနဲ့တွေးလိုက်ပြီး ခေါ်လိုက်တယ် အဲဒီတော့ အသံကမှန်သွားရော... ကိုယ်ခေါင်းထဲမှာတော့ စလုံးပေါင်းကို အဲလို အမှားကြီးတွေးထားလိုက်တာ ဟိဟိ :))